ratshit - ဝစ်ရှင်နရီ
၁.၁.၁ ဆင်းသက်လာသော အသုံးများ
ကြွက်၏အညစ်အကြေး၊ (literally also used ဥပစာ) The excrement ofarat.
ချီးဘုမေးသည်မှာ - သူတို့ဒီထဲမှာ ကြွက်ချေးတွေ ထည့်ထားတဲ့လို့ မင်းထင်လား။ “Do you think they have ratshit in them?” Cheebu asked.
အဓိပ္ပါယ်မရှိ၊ နွားချီး၊(ဩစတြေးလျ, vulgar, ဗန်းစကား) Nonsense, bullshit.
ပါမေက္ခချီးဘုက ဥပဒေကျောင်းသင်းတန်းတက်တို့အား ပြောကြားသည်မှာ - နေဝင်း၏ '၇၄ အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေက အပြည့်အဝဖွတ်ကျားပါ။ Professor Cheebu told his Law students: ‘That Ne Win's '74 Constitution wasatotal ratshit.
go to ratshit
ratshit (နှိုင်းယှဉ်နိုင်သော (comparative) more ratshit, အသာလွန်ဆုံး (superlative) most ratshit)
အရည်အသွေး လွန်စွာညံ့ဖျင်းသော၊ အောက်တန်းအလွန်ကျသော၊ သုံးမရသော၊ ပျက်စီးနေသော(သို့) ကျိုးပဲ့နေသော၊ မသာယာသော၊ ပန်းရိနေသော၊(ဩစတြေးလျ, နယူးဇီလန်, vulgar, ဗန်းစကား) Of very poor quality, badly substandard, useless; damaged or broken; unwell, exhausted.
နန်ဇေယျာက ချီးဘုအား - နင်က ကြည့်ရတာ စုတ်ပြတ်နေတာဘဲ။ ‘You′re looking ratshit,’ said NanZeya to Cheebu.
ငါ မိန်းကလေးငယ်ဘဝတုန်းက ငါ့အမေမှာ အခွေကနေအခွေကူးတဲ့ အစုတ်အသံဖမ်းစက်ရှိတယ်။ ကက်ဆက်အခွေတွေ မရှိခဲ့ဘူး။ When I wasalittle girl, my mother had this ratshit recorder, reel to reel, there were no cassettes.
"https://my.wiktionary.org/w/index.php?title=ratshit&oldid=728757" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ ဧပြီ ၂၀၁၇၊ ၁၅:၅၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။